Budada Zirconium budada, ZrB2 - Goodao Technology Co., Ltd.
Isniinta - Sabti 9:00 AM ilaa 5:00 AM
Budada Carbide Manganese, Mn3C
Budada Tantalum carbide, TaC
Budada Zirconium Carbide, ZrC
Budada Titanium Carbide, TiC
Budada Niobium Carbide, NbC
Aluminium Carbide Powder, Al4C3
Budada daahirnimo sare
Xafnium Powder, Hf
Budada Titanium, Ti
Budada Zirconium, Zr
Biradium, Birta V
Budada Vanadium, V
Budada Zirconium Hydride, ZrH2
Kalsiyum Hydride Powder, CaH2
Qalabka ugu badan
211Aluminium titanium aluminium, Ti2AlC
Aluminium titanium aluminium, Ti3AlC2
Budada iskujirta birta
Daawada Aluminum Aluminium, V-Al
Daawada Tungsten-chromium, W-Cr
Aluminium Cobalt daawaha, Al-Co
Daawaha Aluminium ee Zirconium, Zr-Al
budada daawaha ah ee zirconium copper, Zr-Cu
Daawada birta Zirconium, Zr-Fe
Aluminium Chromium Daawaha, Al-Cr
Daawaha aluminium ee aluminium, Al-Ti
Budada Niobium Nitride, NbN
Kaalshiyamka Nitride Powder, Ca3N2
Budada Tantalum Nitride, TaN
Budada Magnesium Nitride, Mg3N2
Budada is dila
Is-dilidda Manganese, MnSi
Dilaaga Chromium, CrSi2
Nadiifinta Naxaasta, Cu5Si
Dilka Ferro, FeSi2
Xafnium Silicide, HfSi2
Budada Tantalum Silicide, TaSi2
Budada Titanium Silicide, Ti5Si3
Is-dilidda Tungsten, WSi2
is-dilidda vanadium, VSi2
Dilaalka Zirconium, ZrSi2
Budada budada ah
Aluminium budada budada, AlB2
Kalsiyum budada budada ah, CaB6
Xafnium Boride Powder, HfB2
Budada Chromium budada, CrB2
Budada Cobalt Boride, CoB
Biraha Birta, FeB
Budada Magnesium Boride, MgB2
Budada Manganese budada, MnB2
Molybdenum budada budada, MoB2
Budada Tantalum Boride, TaB2
Budada Niobium Boride, B2Nb
Budada Silicon Boride, SiB6
Budada budada ah ee Vanadium, VB2
Budada Zirconium budada, ZrB2
Budada Tungsten Boride, WB2
Kiniiniyada lagu daro walxaha 'Al-Ti' ee loo yaqaan 'Titanium additive Tablets', miisaska Ti
Budada Titanium ee Ku darista Titanium, Ti
Khadka tooska ah
Waad salaaman tahay, u kaalay inaad la tashato alaabtayada!
Aluminium titanium aluminium, ...
waxaa loo isticmaali karaa sida qalabka heerkulka sare ee aerospace, xirmooyinka-iska caabinta qalabka adag ee adag, qalabka jarista, ilaalinta heerkulbeegga heerkulbeegga iyo iskudhafyada korantada ee korantada. Gaar ahaan ku habboon isticmaalka sida dusha sare loogu rogo kubbadda dhalista
>> Hordhaca Alaabada
qaaciddada jirka Zrb2
Lambarka CAS 12045-64-6
Sifooyinka awood madow
Bar dhibic 3040'C
Cufnaanta 6. g / cm3.
Isticmaala waxaa loo isticmaali karaa sida qalabka heerkulka sare ee aerospace, xirmooyinka-iska caabinta qalabka adag ee adag, qalabka jarista, ilaalinta heerkulbeegga heerkulbeegga iyo iskudhafyada korantada ee korantada. Gaar ahaan ku habboon isticmaalka sida dusha sare loogu rogo kubbadda dhalista
>> Shahaadooyinka Cabbirka
>> Xogta laxiriirta
CAS Maya: 12045-64-6
EINECS Maya. 234-963-5
Qaaciddada Molecular: ZrB2
Miisaanka molikalka 112.84
Cufnaanta 4.52g / cm3
Barta dhalaalida (3040 ℃)
Waxay leedahay adkaansho sare waana isku-dhafan bir ah oo qaab-dhismeed laba geesood ah leh
1. Warshadaha Hawada
Isku-darka taxanaha 'ZrB2' wuxuu aad ugu habboon yahay adeegsiga agab heer sare ah oo heer sare ah oo eber soo-saarid eber ah oo loogu talagalay dayax gacmeedyada waaweyn iyo gantaalaha gantaallada sababtoo ah barta dhalaalaysa ee sarreysa, adkaanta sare, habdhaqanka wanaagsan iyo awoodda xakameynta neerfaha. Gaar ahaan horumarka degdega ah ee gantaalada iyo tikniyoolajiyadda gantaalaha, baahida loo qabo qalabka heer-kul sare ee qaabdhismeedka dhoobada ku dhisan zirconium ayaa aad u deg deg badan. Iyada oo qoto-dheerida cilmi-baarista iyo shaqada horumarinta iyo horumarka joogtada ah ee tikniyoolajiyadda wax-soo-saarka, waxaa hubaal ah in cilmi-baarista, soo-saarista iyo adeegsiga isku-darka taxanaha ZrB2 ay horay ugu socon doonaan xawaare cusub.
Zirconium diboride (ZrB2) waxay leedahay bar dhalaal sare, modulus sare, adkaansho sare, hawo heer kulkeedu sarreeyo iyo korantada, iyo caabbinta kuleylka ee kuleylka oo wanaagsan sababtoo ah isku xirnaanta kiimikada oo xoogan. Waxay noqotay waxyaalaha ugu macquulsan ee musharrixiinta ee dhoobada heerkulka aadka u sarreeya. Waxyaabaha dhoobada ah ee loo yaqaan 'ZrB2' dhoobada ayaa si ballaaran loogu isticmaalay inay yihiin qalab heer sare ah oo qaab dhismeed iyo wax qabad leh, sida garbaha marawaxadaha iyo
Farsamooyinka korantada ee dhaliya MHD ee warshadaha duulista. Intaa waxaa dheer, marka la barbardhigo waxyaabo badan oo dhoobada ah, waxay leedahay habsami u fiican korantada, waxayna soo saari kartaa qaybo leh qaabab isku dhafan oo tiknoolajiyad silig ah Si kastaba ha noqotee, ZrB2 wuxuu leeyahay barta dhalaalida sare, oo adag marka la foorarayo iyo xoogaa yar oo adag iyo adkaansho, taas oo xaddideysa codsigeeda jawiga shaqada ee adag. Sababtaas awgeed, aqoonyahannada gudaha iyo dibaddaba waxay qabteen howlo badan oo cilmi baaris ah oo ku saabsan isku-darka ZrB2 oo leh qaybo kale iyadoo la adeegsanayo habab kala duwan oo sintering ah, si loo hagaajiyo sifooyinka dhammaystiran ee qalabka. Qoraalkan, isku dhafka 'ZrB2' iyo cufnaantooda ayaa dib loo eegay.
ZrB2 dhoobada ayaa ah mid aad u fiican, qalab khaas ah oo khafiif ah, oo loo isticmaali karo heerkulka sare ee gacmo-qaboojiyaha ilaalinta, caaryada tuubada, birta birta ah, iwm. baxay qiyaasta heerkulka wax ku oolka ah marka aad u shaqeyneyso sida kuleylka. Thermowell-ka laga sameeyay maadadan waxaa loo isticmaali karaa si isdaba-joog ah muddo dheer biraha dhalaalaya iyo naxaasta. Dhirta dhoobada 'ZrB2' sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa inay ka mid tahay antioxidant-ka ku jira qalabka wax lagu karsado. LV Chunyan et al. ayaa sheegay in isagoo intaa ku daray
ZrB2 ilaa MgO-C diidmada ama toos u adeegsiga ZrB2 wadar ahaan ama budada wanaagsan. Waxay ka dhigeysaa leben jilicsan oo la tuuri karo waxayna muujineysaa iska caabin qiiqa oo aad u wanaagsan iyo waxqabadka iska caabinta dabka. Farsamaynta iska caabinta qiiqa ayaa lagu qiyaasi karaa sida soo socota: B2O3 oo ay soo saartay qiijiinka ZrB2 ee heer kulka dhexdhexaadka ah ee mgo-b2o3 ku shubmay ee MgO-C, sidaasna loo ilaaliyo lebenka.
3 qalab koronto
Qabsashada hoose, nidaamka kala-guurka korantada waa kala-guurka korantada. ku habboon qalabka xiriirka iyo walxaha korantada sababtoo ah adkeysigeeda hooseeya iyo farsamaynta korantada. Waxaa loo isticmaali karaa koronto iyo walax kululaynta heerkulka sare ee heerkulbeegga birta. Sannadkii 1994, Feng Dagan wuxuu soo saaray nooc ka mid ah walxaha kuleylka korontada ku shaqeeya ee ZrB2 iyo garaaf, kaas oo ka shaqeyn kara jawiga qiiqa ee 1200 ~ 1600 ℃
Marka heerkulku yahay 1 600 ℃, wuxuu gaari karaa ilaa 70 MV heerka korantada heerkulka korontaduna waa ilaa 55 μ V / ℃. Natiijooyinka waxay muujinayaan in awoodda heer-kulku ay tahay hal qiime oo khadad wanaagsan leh. Dib-u-soo-celinta awoodda korantada korantada waa 1% ~ 1.5% ee heerkulka la cabbiray ka dib dhowr tijaabo oo lagu sameeyay jawiga qiiqa. Isbedelka ugu sarreeya ee kuleylka heerkulka korontadu waa 0.5% ~ 1% ee heerkulka la cabiray muddo gaaban in ka badan 3 h. Waxaa loo isticmaali karaa ogaanshaha isdaba jooga ah mararka qaarkood gaar ahaan meesha kuleylka birta iyo heerkulbeegga shucaacu aanu ku habboonayn. Sida qalab heerkulbeeg wanaagsan.
Hore: Xafnium Boride Powder, HfB2
Xiga: Titanium Boride Powder, TiB2
Budada Zirconium budada ah
Warshadaha budada ah ee loo yaqaan 'Zirconium boride'
Warshad budada Zirconium boride ah
Soo saaraha budada Zirconium boride
Soosaarayaasha budada ah ee loo yaqaan 'Zirconium boride'
Zirconium boride budada Qiimaha
Jinzhou Haixin Qalabka Birta Co., Ltd.
Weydiimaha ku saabsan alaabtayada, fadlan noo dhaaf e-maylkaaga oo nala soo xiriir 24 saacadood gudahood.